Ciidanka Xoogga dalka oo Gobolka Shabeellaha Hoose ku gubay Gaari siday Qarax (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidanka Xoogga dalka oo Gobolka Shabeellaha Hoose ku gubay Gaari siday Qarax (Sawirro)
Ciidanka Kumaandooska Danab ee xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellada hoose ku gubay Gaari Qarax sida oo kooxaha argagixisada ah ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan Shacabka Soomaaliyeed.
Howlgalka oo dhacay saaka Barqadii ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa in lagu bur buriyo dhagaraha cadawgu u maleegayo shacabka Soomaaliyeed isla markaana waxaa ciidanku cagta mariyey fariisimo ay ku dhuumaaleysanayeen maleyshiyaadka jid iyo jaho diidka ah.
Saraakiisha howlgal hogaamineysa ayaa u sheegay Warbaahinta Qaranka in howlgalka qorshihiisu ahaa in laga hortago isku dayga cadawga oo gaari Saruf ah ku soo rarary qarax isla markaana doonayay in ay soo galiyaan magaalada Muqdisho si dad shacabka ah ee Sooman ay ku dhibaateeyaan.
Ciidanka Xoogga dalka oo Gobolka Shabeellaha Hoose ku gubay Gaari siday Qarax (Sawirro) was last modified: April 30th, 2021 by Admin
Dad badan oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday Israa’iil
Majaajiliistihii caan ku baxay qosolka Joya Borja oo geeriyooday
Dhageyso:-Barnaamijika Salaamaha Wariyasha Idaacada Warsan.
Taliyaha CXD iyo saraakiil ka tirsan Midowga Yurub oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah (Sawirro)
Dhageyso:-Barnaamijka Dhalanyarada ee Idaacada Warsan
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay war NISA ay ka qoreen wargeysyada the Standard iyo star Kenya